Published May 7, 2021 at 5:50 AM CDT
Saraakiisha caafimaadka ee Winnebago, Nebraska waxay sii wadaan inay soo sheegaan tiro aad u badan oo ah xubnaha qabiilooyinka la tallaalay. Waqtigan xaadirka ah, 70% ayaa helay ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID-19. Heerkaas kuma jiraan xarun caafimaad oo shalay dhacday.
Tirada dadka la seexiyay COVID-19 ee Koonfurta Dakota aad ayey hoos ugu dhacday. Waaxda caafimaadku waxay sheegaysaa in 90 bukaan ay helayaan daaweyn, iyadoo darsin ka yar maalintii ka horreysay.
Sharci-dajiyayaasha Nebraska ayaa siiyay oggolaanshaha ugu horreeya ee ilaalinta biyaha loo yaqaan 'coronavirus' ee shaqaalaha hilibka geeya, laakiin tallaabada ayaa wajahaysa mucaarad inkasta oo dhir badan ay durbaba raaceen shuruudaha la soo jeediyay Qiyaas la mid ah ayaa istaagtay Sharci dejinta sanadkii la soo dhaafay. Sharciga cusubi wuxuu tirtirayaa shuruudo 6-cagood ah oo looga goynayo shaqaalaha safka iyo sidoo kale heerarka hawo qaadashada ee adag, laakiin wali wuxuu amrayaa waji-furka, fasaxa mushaharka ah ee shaqaalaha tijaabiya waxtarka wanaagsan iyo fursadda lagu tijaabiyo waqtiga shirkadda.
Saraakiisha waxaa laga yaabaa inay kordhiyaan xaddiga biyaha lagu sii daayo Webiga Missouri labada bilood ee soo socda si loo hubiyo inay webiga ku jiraan biyo ku filan magaalooyinka ku tiirsan biyaha iyo taraafikada daran. Ciidamada Mareykanka ee (Injineerada) Injineerada ayaa sheegay in biyo aad u yar lafilayo in ay ku qulqulaan wabiga sanadkaan maxaa yeelay xaaladuhu waa kuwo aad u qalalan barafka barafka ayaa ka hooseeya heerarka caadiga ah. Bishii Abriil waxay ahayd bil aan caadi ahayn oo qalalan gobolka. Sababtaas awgeed, saraakiishu waxay yiraahdeen kaliya qiyaastii 69% ee xaddiga caadiga ah ee biyaha ayaa la filayaa inay u gudbaan Webiga Missouri sannadkan.
Golaha guurtida ee Iowa ayaa meel mariyay sharci ka mamnuucaya gobalada iyo dowladaha hoose inay soo saaraan kaararka aqoonsiga ee sheegaya in qof uu…